Mashiinka Mashiinka Calaamadaha Wadada Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. MAKIINADDA ACE
Gariiriye la taaban karo
Gariiriye la taaban karo koronto la Frame
Gariiriye la taaban karo ee korontada ZN
Qalabka shidaalka ee Gaaska Shidaalka
Gariiriye la taaban karo oo Joogto ah
Gacanta Lagu Qabto gariiriye
Gariiriye Mashiinka la qaadan karo
Socda-gadaal Power Trowel
Raacitaanka-On Trowel Power
Mashiinno Iskudhaf ah
KCD Oogada Oogada Dhammaystirka
Mashiinka Isku-dhafan ee Truss
Usheeda dhexe gariir la taaban karo
Mashiinka Calaamadaha Wadada
Feejignaanta Saxanka Forward
Iskuduwaha Saxanka Wareegtada ah
Jarida la taaban karo
Bir Jarida birta
ACE waxay soo bandhigi kartaa mashiinka calaamadeynta wadada oo tayo sare leh. Mashiinka Calaamadaha Cadaadiska Riix waa mid ka mid ah mashiinnada muhiimka u ah calaamadeynta dhalaalka kuleylka. Tayada calaamadeynta waxay kuxirantahay xasilloonida mashiinka mashiinka iyo kala duwanaanta hawlgalka ee goos gooska, taas oo ka tarjumeysa kala duwanaanta waxqabadka mashiinka.
Video la xiriira
Mashiinka Calaamadeynta Wadada Thermoplastic waxaa loo isticmaalaa calaamadeynta khadadka milicsiga (khadadka toosan, khadadka dhibcaha, fallaaraha jihada, waraaqaha iyo astaamaha) wadada dheer, wadada magaalada, baarkinka, warshad iyo bakhaar. Waxay leedahay laba nooc oo Hand Push ah iyo mid otomaatig ah (engine driven).
Mashiinka Calaamadeynta Riixista (Nooca Iskuleenta)
Dabool Kuleylka jirka
Mashiinka Mid gacanta, mashiin la'aan
Cabirka 1200 mm * 900 mm * 900mm
Awoodda wax soo saarka Qiyaastii 1500m / h saacaddii caadiga ahayd ee xariiqa keliya
Dhumucda rinjiga 1.2-4mm
Ballaarinta Arjiga 100mm, 150mm, 200mm
Dayactirka heerkulka rinjiga 170-220 ℃
LPG dhululubo caadi ah 15kg,10kg
Balaadhinta calaamadeynta 50,80,100,120,150,200,230,250,300mm, iwm Mashiinka ayaa aad ugu haboon calaamadeynta 450mm xarig digaag.
Awoodda haanta ee kuleylka leh 105kg
Shaqaynta Rinjiga dhalaalay kuleyl sii calaamadee khadka.
Wadarta miisaanka mashiinka 125kg
Awoodda sanduuqa kuul muraayadaha dhalada ah 25kg
Habka qaybinta kuusha Qalabka Gear, Si otomaatig ah u xajin
La shaqee preheater Haa
Waxtarka shaqada maalinlaha ah 1000 m2
Qalabayn kara darawalka kor u qaadista, saxanka kor u qaadista, kuraasta kor u qaadka? Kordhinta Wadista (oo leh Mashiinka)
Astaamaha ugu Muhiimsan Mashiinka Calaamadaha Wadada Thermoplastic:
1.Xasilooni dheeri ah:
Iyada oo loo marayo hagaajinta culeyska, wareegga hore ee la ballaariyay, Mashiinka Calaamadeynta ayaa ka xasilloon kuwa dhaqameed marka la calaamadeynayo isgoyska dameerka 450mm.
Iyada oo loo marayo baaritaanka culeyska soo noqnoqda, dib u soo celi mashiinka cusub, mashiinka calaamadeynta ayaa aad ufudud badan, hoos udhaca xoogsaaraha howlwadeenka. Marka shaqooyinka calaamadeynta ayaa noqonaya mid fudud oo wax ku ool ah.
3.Fudud in la shaqeeyo:
Kala duwanaanta kala duwanaanta hawl galka inta udhaxeysa 300mm ilaa 200mm, si sax ah, oo fududahay in la xakameeyo, sidaa darteed dhibaatooyinka noocan oo kale ah sida ka noqoshada qoob-ka-ciyaarka oo gaabis ah iyo calaamadda dhameystirka aan dhameystirneyn waa la xalliyaa. Qaab dhismeedka riixitaanka dhibcaha dhibcaha badan ayaa loo adeegsadaa si looga fogaado waxyaabaha sixir bararka badanaa waxay ku dhacdaa alaabooyin isku mid ah sababo la xiriira labada dhinac ee si adag loo adkeeyay iyo cilladaha waaweyn ee dhexda sheyga si isku mid ah.
La soco ra'yi celinta macaamiisha ka dib markaad hesho badeecadaha, iskuna day inaad sida ugu fiican ugu xalliso una hagaajiso tayada iyo adeegga
in ka badan 90% alaabada ayaa la dhoofiyaa
Diirad saarista Wakiilka Gaarka ah iyo inaan macaamiishayada u qaadno inay isla koraan
1.Waa maxay ku saabsan rarka?
J: Waxay ku jirtaa doorashadaada. Badanaa, waxaan kugula talineynaa maraakiibta badda oo bixisa qiime macquul ah. Sidoo kale, qaybaha dayactirka, waxay ku jiri kartaa FEDX, DHL iyo xawaarahooda caalamiga ah.
2. Miyaad soo saari kartaa mashiin la habeeyay?
J: Haa, waan kari karnay. Waxaan nahay soo saaraha mashiinka calaamadeynta wadada thermoplastic-ka ee Magaalada Guangzhou.
3. Miyaan hagaajin karaa dhumucda xariiqda? Oo sidee?
J: Haa, waxaa lagu hagaajin karaa mindi iyo haad. Dhumucda khadka caadiga ah waa 1.2-4 mm.
Miyaad soo saari kartaa mashiinka kartoo?
J: Haa, waan kari karnay. Waxaan nahay soo saaraha mashiinka calaamadeynta wadada thermoplastic-ka ee Magaalada Guangzhou ..
Hore: Mashiinka calaamadeynta wadada oo dhan
Xiga: 65kgs oo leh 10.5kn bir ah oo biriijka qalabka wax ku oolka ah
GW42E-GW50E Nooca otomaatiga ah
Qalabka birta birta ah GQ40
45mm 13 / 4inch nooca Japan gariiriye la taaban karo ...
GW40A 2.2KW Nooca gacanta
Ergada: Waxaan bixinaynaa qalab dhisme oo casriyeyn ah waxaan kuu fududeyn doonnaa noloshaada shaqada
Himilada: Inay noqoto bixiyaha ugu wanaagsan ee caalamiga ah ee qalabka dhismaha qandaraasleyaasha xirfadlayaasha ah
Qiimayaasha: macaamiisha diirada saarey, Hal-abuurnimo, Mahadnaq, guul wada guuleysi
Cinwaanka: Shenjiao Village, Gulin, Ningbo, China 315159